Ulo | Hovesin(DG) Industrial Co.,Ltd.
Oem / odm Ọrụ
S60 Smart mkpọchi
S60 bụ imepụta ọhụrụ nke mkpọchi ụzọ ụzọ amamịghe, jiri usoro kachasị ọhụrụ, nke kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ aluminom 30mm-80mm niile, ọnụ ụzọ osisi na ọnụ ụzọ nchekwa. Ka ọ dị ugbu a dakọtara na ọtụtụ mortise. 6 mepee ụzọ, nke nwere ike jikọọ na ekwentị mkpanaaka site na WIFI ma ọ bụ Bluetooth, ọ nwere ike ijikwa mkpọchi ọnụ ụzọ smart n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe n'ụwa.
H50 Smart mkpọchi
H50 bụ mkpọchi ọnụ ụzọ akpaka ejiri rụọ ọrụ nke zinc alloy yana teknụzụ ọhụrụ akpaka iji kpọghee ma mechie ọnụ ụzọ na-enweghị iji aka gị. 6 mepee ụzọ, nke nwere ike jikọọ na ekwentị mkpanaaka site na WIFI ma ọ bụ Bluetooth, ọ nwere ike ijikwa mkpọchi ọnụ ụzọ smart n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Ọ ga-ewetara gị ahụmịhe ndụ ọhụụ.
H10 Smart mkpọchi
Mfe ma mara imewe, Ka ọ dịgodị dakọtara na a dịgasị iche iche nke mortise. 6 mepee ụzọ, nke nwere ike jikọọ na ekwentị mkpanaaka site na WIFI ma ọ bụ Bluetooth, ọ nwere ike ijikwa mkpọchi ọnụ ụzọ smart n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla